Izao Tontolo Izao: Misaona tamin’ny nampiharana ny didy famonoana an’i Troy Davis · Global Voices teny Malagasy
Izao Tontolo Izao: Misaona tamin'ny nampiharana ny didy famonoana an'i Troy Davis	Voadika ny 22 Septambra 2011 8:33 GMT
· vakio ato ny lahatsoratra nadika [en]	Na dia nahazo fampiatoana aza i Troy Davis androany maraina [alarobia], efatra ora monja taorian'ny tatitra nataonay dia novonoina i Davis.
Manerana ny tany, ary indrindra any Etazonia, dia misaona ny Twitter. Malaza ankehitriny ny tenifototra #RIPTroyDavis ary milaza ny fihetseham-pony momba ity raharaha Davis ity ny tsirairay, ary dia voaresaka ihany koa ny momba ny fanamelohana faratampony any Etazonia.
Avy any Philadelphia, @ShamaraOnAir no mitatitra:
Mijery CNN 11:08 no fotoam-pamonoana
Avy any Iowa, @Jasminenkelly no misiokantsera:
Mbola misy amin'ny ambaratonga samihafa ihany ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny tsy rariny… Tsy hitantsika an-taratasy intsony ny KKK ry zareo no mpanao ny lalàna.
Mikamenona manoloana ny didy famonoana ho faty ny mpanao gazety Dan Gillmor, tamin'ny fitenenana hoe:
Ratsy loatra ny fisian'ny famonoana ho faty. Saingy androany, namono olona hafa indray ny rafi-”pitsarana” eto amintsika nefa ahiahiana tanteraka ny mahameloka azy.
Avy any Barbados, @bajanswaggboy no nanamarika:
Tsy nahitana fitaovam-piadiana, tsy voamarina ADN, niverina tamin'ny fijoroany vavolombelona ny 7 amin'ny 9. Tena ahoana mihitsy no hamonoanao olona tsy misy porofo?
Ary avy any Angletera, @tweety_coco no niteny:
Mbola tohina. Tsy mety mino hoe mitranga izany amin'ny taona 2011.
Nanambara i Linda Sarsour (@lsarsour) mpikatroka Palestiniana-Amerikana:
Troy Davis no ho solika ilaiko hanohizako ny fitakiako hisian'ny rariny ara-tsosialy. Tsy ho adinoina mandrakizay izy.
Na dia nampifantoka ny sain'ny besinimaro aza ny raharaha Troy Davis, maro no nilaza fa tranga naningana iny, ary tsy hiady hanohitra ny fampiharana famonoana ho faty ny olom-pirenena Amerikana. Na nametraka toy izao ilay Palestiniana @Falasteeni fotoana fohy nialoha ny famonoana ho faty:
Ny mampalahelo ahy kokoa manoloana ny hamonoana an'i Troy Davis dia tsy hisy zavatra hafa hitranga, tsy hitombo ny hetsika hanome toky fa tsy hisy intsony ny tahaka izao
Voadika ny 22 Septambra 2011 8:33 GMT
Fitantaràna hafa momba ny Etazonia Nahazo Hatramin'ny $100.347 Hampafana Kokoa An'i Syria Mampalahelo Anaty Ririnina
Nederlands · Wereld: Rouw om de executie van Troy Davis
Français · Monde : En deuil de Troy Davis, exécuté
Ελληνικά · Κόσμος: Θρηνώντας για την εκτέλεση του Troy Davis
polski · Świat: żałoba po egzekucji Troy'a Davisa
Shqip · Bota: Mbajtja zi për shkak të ekzekutimit të Troj Dejvisit
Español · Mundo: Duelo por la ejecución de Troy Davis
Italiano · Commenti e riflessioni via Twitter dopo l'esecuzione di Troy Davis
English · World: Mourning the Execution of Troy Davis
Zon'olombelona, Fanoherana, Fiaviana & Foko, Mediam-bahoaka